Sabayon 8, Rakibaadda Kadib, Dareenkayga iyo wax kale (Cusbooneysiiyay) | Laga soo bilaabo Linux
Perseus | | Qaybinta, GNU / Linux, Lagu taliyay
Dhamaan kuwa i garanaya, waad ogtahay inaan ahay qof aan nasan markay tahay isku dayga diro, ama sida saaxiibkay Nano yidhi "Waxaan ahay distoor heer sare ah oo boodboodaya" XD, iyo waxaas oo dhan sababtoo ah raadinta shaqsiyadeed ee qaabka ugu habboon ...
Markan waxaan go aansaday inaan tijaabiyo Sabayon markii labaad, waxaan ka tagay jacayl xoogleh oo Chakra iyo soo noqnoqosho yar oo ku saabsan Archlinux, taas oo igu reebtay dhadhan qadhaadh rather. Laakiin kaalay, aan u nimaadno waxa runta ina khuseeya: D.
Waa maxay Sabayon?
Linux Sabayon (horey loogu yaqaanay RR4 Linux / RR64 Linux (32-bit version / 64-bit version); waa qeybinta talyaaniga oo ku saleysan Gentoo, waxaa abuuray oo dayactiray Fabio Erculiani ("lxnay") iyo Kooxda Sabayon.
Sabayon Linux waxay kaga duwan tahay Gentoo Linux inaad haysato rakibo dhammaystiran oo nidaamka qalliinka ah adigoon soo uruurin dhammaan baakadaha, maaddaama ay isticmaasho xirmooyinka binary ee horay loo sii daabacay Sida ay iyagu yiraahdaan: "Sabayon Linux waa (weligiina ahaan doontaa) 100% waafaqsan yahay Gentoo Linux".
Falsafadiisa waxay raacdaa laba sharci oo fudud:
OOTB (sanduuqa ka baxsan) Waxqabadka: Ma jiraan wax dhibaato ah wax walbana waa inay iska shaqeeyaan.
KISS (Ka dhig mid fudud oo doqon ah!): Waxyaabaha doqon ka dhig ha fudud!
Falsafada Out of Box laga bilaabo Sabayon, waxay nolosha u fududeyneysaa dhammaan kuwa jecel inay helaan nidaam dhameystiran oo diyaar u ah wax qabad marka rakibidda la dhammaystiro. Si aan fikirka u balaadhiyo inbadan, waxaan kuu sheegayaa inay rakibto: darawalada, koodhadhka, flash, khamriga, sanduuqa khaaska ah iyo aalado dheeri ah oo iga baxsanaaya. Marka waxba in aad madaxaaga ku jabiso barnaamijyadan 😀
Qodobbada kale ee muhiimka ah waa:
Waa qaybinta sii deynta wareejinta, sidaa darteed waxaan had iyo jeer adeegsan doonnaa noocyada hadda jira ee codsiyadayada: D.
Ma lahan jadwal sii deyn oo qeexan, sida abuuraheedu leeyahay: Nooc cusub ayaa soo bixi doona markuu diyaar yahay .. ", inkasta oo sida caadiga ah aysan jirin waqti badan inta udhaxeysa furitaanka;).
Waxaad kala dooran kartaa dhowr maareeye daaqad ama aagagga desktop-ka, sida: Gnome, KDE, XFCE, LXDE, Fluxbox, E17.
Sabayon waxay bixisaa ogeysiin cusbooneysiin u gaar ah, oo loo yaqaan Magneto Updates Notifier
Qaybintaan waxaan ku rakibi karnaa ama ka saari karnaa codsiyada laba siyaabood oo kala duwan, midkoodna iyada oo loo marayo Bakhaarka 'Entropy Store', oo ah habka ugu badan ee lagula taliyo, ama sida Gentoo oo kale, iyadoo la adeegsanayo Portage. Waa in la ogaadaa in kaliya lagu talinayo in la isticmaalo mid ka mid ah labadan xulasho, haddii kale waxay sababi kartaa xasillooni darro nidaamka: S.
Gaar ahaan Sabayon marka la rakibayo codsiyada lahaanshaha waa inay ku weydiisato inaad aqbasho shuruudaha shatiga ka hor intaadan sii wadin rakibidda. Tani shaqsi ahaan way igu weyn tahay aniga, maadaama sidan oo kale aan ku arki karo codsiyada gabi ahaanba bilaashka ah iyo kuwa aan ahayn.
Sabayon si otomaatig ah uma cusbooneysiiso kernel-ka, tani waxay siinaysaa adeegsadaha fursad uu ku doorto inuu sameeyo iyo in kale, weyn 😀
Waxay leedahay shaqo farshaxanimo aan fiicnayn, wax yar uun baa ku faani kara this.
Waa kuwan shaashadaha qaarkood:
Muxuu Sabayon 8 soo celiyaa?
In kasta oo nuqulkii ugu dambeeyay ee Sabayon soo baxay wax yar ka hor bil ka hor, illaa iyo hadda waxaan fursad u helay inaan tijaabiyo (dhammaantood sababta oo ah Chakra XD), laakiin waa kuwan astaamaha ay sii deyntaani leedahay:
Qaab-wareejinta Xad-dhaafka ah
Taageerada hooyo ee nidaamka faylka Btrfs
Uruurinta KDE Software 4.7.4
Qaran dumis 1.7
Qaab dhismeedka Entropy 1.0 RC86
Taageerada IME iyo xarfaha aan Roman-ka ahayn
Kuu ogolaanayaa inaad si loo soo dajiyo luqadaha aan-Latin
In ka badan 12.000 oo codsi ayaa laga heli karaa keydadkii ugu dambeeyay ee software-ka
Maareeyaha desktop-ka qorfaha (waxaa laga heli karaa meelaha keydka ah)
Maareeyaha desktop Razor Qt (waxaa laga heli karaa meelaha keydka ah)
Taageerada ARMv7, oo in ka badan 2000 baakado diyaar u ah in lagu rakibo
Iyo cilado badan ayaa la saxay marka loo eego noocyadii hore
I686 Processor waafaqsan - Intel Pentium II / III, Celeron, AMD Athlon;
512 MB RAM loogu talagalay GNOME ama 768 MB RAM oo loogu talagalay KDE SC;
8 GB oo ah meel disk adag oo bilaash ah;
Kaarka fiidiyowga ee 2D;
Dual Core Processor - Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 X2 ama ka sii wanaagsan;
1 GB oo RAM ah;
15 GB oo ah meel disk adag oo bilaash ah;
Kaarka fiidiyowga ee 3D - Nvidia, AMD ama Intel;
Haysashada Anaconda oo ah rakibeye garaaf ah (oo lamid ah sida Fedora leedahay), rakibistu waxay noqoneysaa ciyaarta ilmaha. Waxaan kaliya u baahanahay inaan kabaha ku darno liveDVD oo aan bilowno rakibo. Iyo tan ugu baahida badan, sidoo kale waa suurtagal in lagu rakibo qaabka qoraalka: D.
Marka rakibida la dhammeeyo, waxaan sii wadi doonnaa inaan dib u bilawno kombuyuutarkeena si sidan aan ugu raaxeysan karno distoorkan weyn.
Mar alla markii aan soo galnay markii ugu horreysay, Magneto Notifier ayaa na tusi doonta inaan haynno cusbooneysiin badan oo la heli karo (waxay qaadan kartaa waqti yar, xusuusnow inay tahay rakibaad dhowaan;)). Kahor intaadan bilaabin dadaalka iyo orodka si aan isugu dayno inaan cusbooneysiiyo nidaamka, waa inaan dulqaad muujino, maadaama aan wali sameynayno xoogaa hagaajin ah si looga fogaado bilowga iyo timo luminta ikhtiyaari ah isla sababtaas XD.
Maaddaama Sabayon ku talineyso in loo isticmaalo Bakhaarka 'Entropy Store' maamulka maareynta arjiga, waan ku dul dhisi doonnaa tan. Haddii qof doonayo inuu isticmaalo Protage halkii uu ka isticmaali lahaa Entropy wuu raaci karaa xiriiriyahan Cusbooneysiinta Entopy adoo adeegsanaya Portage.
Ugu horreyntii, waxaan fureynaa terminal waxaanan sameynaa waxyaabaha soo socda:
waxaan galnaa erayga sirta ah. Waxaan cusbooneysiineynaa:
Kaliya haddii aad dhibaatooyin leedahay, iskuday:
Marka tan la sameeyo waxaan u baahanahay inaan cusbooneysiino Entropy ka hor inta aan bilaabin cusbooneysiinta nidaamka oo dhan:
Waa inaan marwalba cusbooneysiino equo conf kadib markaan cusbooneysiinno Entropy:
Waxaan mar kale cusbooneysiineynaa:
waan sii wadeynaa:
Kaliya waa inaan cusbooneysiinnaa nidaamka:
Inta hawshani socoto, waxay na weydiin doontaa inaan aqbalno rukhsadaha qaar ka hor intaadan sii wadin cusbooneysiinta. Cusboonaysiinta waxay qaadan kartaa 3 ilaa 8 saacadood, waxay kuxirantahay xawaaraha soo dejinta bixiyahaaga internetka, dabcan waxaan usii wadi karnaa shaqada si caadi ah inta howshan socoto ama hadaan doono, waan sameyn karnaa habeenki. Ha iloobin inay tahay rakibo dhowaan iyo in distro-kani uu yahay sii deyn;). Ugu dambeyntii waxaan sameynaa:
Markaad cusbooneysiiso nidaamkayaga iyo kahor intaadan dib u bilaabin, aan hubino dhowr waxyaalood (a * xulashada lagu soo xulay de facto):
Aynu hubino nooca kernel ee aan rakibnay:
Waxaan hubineynaa darawalka fiidiyowga ee la xushay:
Ikhtiyaar ahaan waan xaqiijin karnaa waxyaabaha soo socda:
Nooca ugu dambeeya ee gcc-config:
Waxaan hubinaynaa in binutils la qaabeeyey:
Nooca Python ee hadda:
Si aan u dhammeyno, waxaan sameynaa baaritaanka ugu dambeeya.
Waxaan dib u eegeynaa ku-tiirsanaantayada:
Waxaan hubinay maktabadahayaga:
Iyada oo waxaas oo dhan, waxaan hadda si deggan dib ugu bilaabi karnaa kombuyuutarkeena oo aan ku raaxaysan karnaa: D.
Ku rakib, ka bixi oo ka raadi codsiyada Sabayon
Si aan u fulino ficilladan waxaan si toos ah uga sameyn karnaa Bakhaarka Entropy, oo ah maamule arji garaaf ah, aadna ugu eg Debian's Synaptic. Waa kuwan shaashadaha qaarkood:
Kuwa jecel terminal, waxaan sameyn karnaa isla sida soo socota, waan isticmaali karnaa sudo (kaas oo horeyba loo rakibay) ama waxaan si toos ah ugu galnaa asal ahaan amarka su:
Ku rakib codsi:
Tani waxay na siin doontaa fursad aan ku aragno xirmada ka hor inta aan la rakibin.
Ka tirtiro codsi:
haddii aan sidoo kale dooneyno inaan tirtirno feylasha qaabeynta ee arjiga la yiri:
Sabayon xaqiiqdii waa qaybsi weyn, heerka Chakra ama Archlinux, waa fududahay in la isticmaalo oo aad ugu raaxeysata isticmaalaha, sida Linux Mint ama Ubuntu. Kormeer ahaan, KDE ee ku taal Sabayon waxay bilaabaysaa in ka yar kalabar in ka badan wixii ay cunaysay Chakra, taas macnaheedu waa in si heer sare ah loo habeeyay: D. Wax qabadkeedu waa mid heer sare ah oo leh astaamahaas gaarka ah ee aan si toos ah u cusbooneysiinin firida, iska ilow argagaxa kernel iyo cabsi laga qabo in la cusbooneysiiyo kernel maxaa yeelay qalabkaaga ayaa laga yaabaa inuusan u fulin sidii hore. Waxay tagaysaa iyada oo aan la sheegin in isticmaalaha kaliya uu daneeyo rakib oo isticmaal, wax kaliya lagu arkay Chakra oo xoogaa la mid ah Linux Mint. Xaqiiqda kale ee xiisaha leh ayaa ah in ay ahayd qaybinta kaliya ee ka faa'iideysanaysa ficil ahaan dhammaan xiriirkeyga isku xirka (5Mbps) markii laga soo dajinayo codsiyada ka imanaya server-yada Sabayon, taas oo ah wax weyn: D.
Waxaa jira nooc ka mid ah Sabayon oo la yiraahdo Sabayon Awesome y Sabayon Core. Faahfaahin intaa ka yar ayaa noqon doonta:
Awesome waa maamule daaqad Nidaamka X Window Window ee lagu sameeyay C iyo Lua luuqadda barnaamijyada. Tan dambe ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu rakibo oo lagu kordhiyo maareeyaha daaqadda. Sida maamule daaqadaha nooca maamulada daaqada, waxay u suurta galineysaa qofka isticmaala inuu si wax soo saar leh u maareeyo daaqadaha isagoon isticmaalin jiirka.
Dhirta Sabayon: wuxuu u keenaa maamule daaqad Fluxbox.
Ku saabsan astaamaha Sii-deynta Xad-dhaafka ah:
Waxay ka dhigan tahay inay jiraan maamul otomaatig ah oo baakadaha ku jira keydadka leh 'Entropy Matter ebuild tracker', maareeyaha xirmada ee la heli karo oo ay weheliyaan halyeeyga Portage.
PS: Gracias @Joosh y @ Daniel u fiirsashada 😉
Sida loo cusbooneysiiyo firida
Waa maxay Cajiib?
Sii-deynta Xad-dhaafka ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Sabayon 8, Rakibaadda Kadib, dareenkayga iyo wax kale (Waa la cusbooneysiiyay)
Kaliya waxaan kuu sheegayaa laba shay:
1- Weyn !!!
2- Ma ogtahay sida loo iibiyo sheyga ¬ ¬ Xitaa waxaan rabaa inaan isku dayo, Xfce aad u xun waxaa laga yaabaa inuusan u fiicneyn sida KDE 😛
Horey ayaan ugala soo degay, laakiin wali ma awoodin inaan hubiyo, waxaan isku dayi doonaa dhamaadka usbuuca waana kuu sheegi doonaa
Waad salaaman tihiin, baloog wanaagsan, oo ka mid ahaa kuwa aan jeclahay;
Waxaan ku rakibay sabayon 8 64-bit kombuyuutarkayga cusub, waxaan isticmaali jiray noocyo kale oo 32-bit ah in kasta oo aan muddo dheer sii dheerayn (waan jeclahay aaladaha jilicsan), marwalba waan jeclaa oo maskaxda ayaan ku hayaa.
Dibiga: Kadib rakibida nooca AMD64, maareeyaha gnome wuxuu ahaa mid layaableh, laakiin wuu kufashilmay garaafka, markii aan cusbooneysiinayay, waxaan helaa gnome aad caadi u ah, arinta ayaa ah tan noocan oo kale ah oo si fiican u hagaaji distro , Waxaan jeclaan lahaa inaad isiiso, hadaad naxariis badan tahay, beel Sabayon ah oo Isbaanish ah.
Waan ka xumahay, ugu dambayntiina waxaan idhi waxaan jeclahay distro-ga xilligan la joogo tan iyo Ubuntu 11.10 iyo mint 12 oo ah 64 waxoogaa hoos ha ii yara dhigo. Pclinuxos, xoogaa yar, laakiin sidoo kale maahan.
Mahadsanid waana ka xumahay markale
Waad ku mahadsantahay faalladaada bro. Kani waa cinwaanka rasmiga rasmiga ah ee loo yaqaan 'Sabayon forum' (Isbaanish) 😉
Salaan kadib waxaan rajeyneynaa inaan kusii arki doonno halkaan seeing
Boostada wanaagsan, sida had iyo jeer loo sharraxay.
Haye iyo maxaa ku dhacay Chakra? Waad cidlootay, khaa'inul waddan! xD
XD, runtii aad ayaan u jeclahay Chakra, waxa kaliya ee aan u adkaysan karin waa falsafadeeda xad dhaafka ah ee GTK: P, hadii ay dulqaad badan lahaayeen, i aamin aniga kaama dhaqaaqi doono kooxdeyda 😀
Hadday run tahay, waxay noqon kartaa wax aad looga xumaado, waa inaad hagaajisaa oo aad kordhisaa bakhaarka GTK, laakiin kuwa jira ayaa igu filan.
Waad saxan tahay, Chakra waa mid aad u daran markay tahay GTK iyo xirmooyin guuldaraysta labadiiba saddexdiiba ... Waxaan isku dayi doonaa Sabayon si aan u arko sida ay tahay.
Waad ku mahadsantahay booqashadaada iyo ka dhiibashadaada bro.
Waxay ila egtahay aniga wanaagsan, si loo gaaro nadiifinta sare.
Aniga ahaan sabayon waa distro ugu fiican ee hada jirta, waqti yar kahor waxay ahayd mid aan xasilloonayn, laakiin waxbadan ayey kusoo hagaagaysay dhinacaas waqti gaaban: p
ahh oo waan illoobay inay ka mid tahay qaybinta aan isku dayay ee sida ugu fiican ugu shaqeysa btrfs, oo aan sidoo kale aad u jeclahay
Waa mid ka mid ah qaybinta aan tijaabiyey ee sida ugu fiican ugu shaqeysa btrfs
Aniga oo garanaya kahor XD, waxaan doonayay inaan isku dayo waqti dheer, laakiin ma aanan awoodin sababtoo ah shaki xasiloonida. Waad ku mahadsantahay xogta iyo salaanta 😉
Waxaan u isticmaali jiray btrfs, nooca loo yaqaan 'sabayon' ee loo yaqaan 'sabayon' ayaa si fiican loola dhaqmaa culeysyo culus sidoo kale bil gudaheed btrfs ma aanan cabanin, in kasta oo ay wali jiraan barnaamijyo si wanaagsan loogu isticmaalo nidaamkan feylasha, ma aqaano inay Waqtiga loo socdo nidaamkan faylka si dhab ah, si kastaba ha noqotee sabayonku waa qaybsi aad u xiiso badan oo leh kulan saaxiibtinimo oo Isbaanish ah
Waxay u badan tahay in sabayon uusan la imaan doonin Nepomuk oo laga yaabo akonadi bilowga. Cusbooneysiinta waxay umuuqataa inay waxoogaa wareersan yihiin waxaad tirisay: /
I aaminsa in nepomunk uu firfircoon yahay by fac facto.
Waxaad u jeeddaa "default". Laakiin haye, illaa iyo inta aadan dhihi "ugu talagal" (oo loogu dhawaaqo "ugu talagal", taasi waa, xun), wax walboo wanaagsan.
Waxaan kuugu hambalyeynayaa maqaalka Sabayon, waa mid aad u xiiso badan oo kaa dhigaya inaad rabto inaad tijaabiso.
Waad salaaman tahay, miyaad i dhaafi doontaa xiriirka soo dejintu waa in websaydhkaaga oo dhan la isku duubay waxaan rabaa DVD-ga loogu talagalay amd 64 bits leh kde salu2
Ku jawaab akakarink
Toos u soo dejiso:
Aniga ahaan waa dalkayga labaad ee aan jeclahay, ka dambeeya Mint12, sababtoo ah PPA-yada, maxaa yeelay waxa sifiican uga socda Sabayon.
Waxaan u maleynayaa inay la mid tahay sidaad u tidhi oo aan ku daro saddex waxyaalood:
1.- bulsho weyn, IRC iyo fagaarayaasha, maahan cabir ahaan, laakiin caqli ahaan, waxaan ku bartay mahadnaqooda inay isticmaalaan su halkii ay ka heli lahaayeen suudo, iyo inbadan kadib ayaa lasiidaayay dhibaatooyin kala duwan oo suudo ah.
2.- waxa aan ka jirin Sabayon, haddii loo yaqaan 'gentoo' waxaa lagu rakibi karaa EMERGE, laakiin haddii ay mar dambe ku daraan, waxay ka cusbooneysiin doonaan 'equo', oo leh nidaam aad u fiican oo ku habboon xirmooyinkaaga. Tusaale ahaan Chrome wuxuu ku jiraa saliida 'gentoo repos', laakiin kuma jiro Sabayon ee leh kaliya Chromium.
3.- iniirka waxaa laga soo uruuriyay 1000 Hz mana ahan 100 Hz sida Ubuntu, waxay ku tuseysaa xawaaraha
3. 1/2 Gnome Shell iyo Cinnamon oo wata qalabka 'ATI catalyst' ayaa bixinaya shaashad waqti ka waqti, laakiin aad uga fiican Ubuntu OO iyo Ubuntu PP wax alla wixii ay u socdaan - oo loo yaqaan oo loo yaqaan "bug" system system markii la ciyaarayo fiidiyowyada -. Waxay sameeyeen khiyaano inkasta oo aanan garanayn midka.
Xirmada waxaa lagu soo ururiyey 1000 Hz mana ahan 100 Hz sida Ubuntu, waxay ku tuseysaa xawaaraha
Xogtaas ma aanan ogeyn, waa wax xiiso leh. Waad ku mahadsantahay wadaagista 😉
Si dadku aysan u jahwareerin, wax kale ma jiraan. Sabayon la mid maaha in 5 daqiiqo lagu rakibo 'Gentoo' ... baakadaha Sabayon waa la diyaariyey, nimcada Gentoo ayaa ah inaad adigu isku duba ridi karto, adoo hagaajinaya koodhka processor-kaaga, sidoo kale, markaad ururinayso kernel-ka waxaad ururin kartaa oo keliya darawallada waxaad u baahan tahay dhibaato ka jirta Sabayon oo aad xalka ka raadineyso golayaasha Gentoo. Xalku ma noqon karo mid ansax ah, waxay kuxirantahay waxa ay dhibaatadu tahay. Salu100
Jawaab si aad u kasbato
Maqaal aad u wanaagsan, waxaan hadda isticmaalayaa nooca xfce oo sifiican ayuu u shaqeeyaa; waxay cuntaa ilo aad u yar waana heer sare (fikirkeyga shaqsiyeed). Waxaa jira nooc la yiraahdo CoreCDX, oo aan is leeyahay waxaa lagu rakibi karaa si la mid ah Archlinux. Ma haysaa wax macluumaad ah oo ku saabsan noocaas?
Waad ku mahadsan tahay maqaalka iyo amarrada.
waxa ay ka yiraahdaan noocyadan waa in uu yahay; Sabayon 8 CoreCDX oo la socota Fluxbox
Taasi waa sax, sida uu saaxiibkay leeyahay furaha, "nooca" Core wuxuu leeyahay fluxbox, haddii aad rabto inaad isticmaasho maareeyaha daaqadan, waxaad ugu baahan tahay koox leh ilo kooban ama waxay noqon kartaa ikhtiyaar aad u fiican server;). Xitaa waad u adeegsankartaa si aad u sameysato noocaaga shakhsi ahaaneed ee Sabayon 😀
sabayoon .... maxaa laga leeyahay! Waa hadduusan ahayn dariiqa aniga aad ii cajabiyay waqtigii aan isku dayay markii ugu horeysay, ma xasuusto inta sano ka hor, laakiin in ka badan ama ka yar 7 ilaa 8 wayna sii socotaa sidaas, anigu garan maayo waxay leedahay laakiin waan ka helay.
Marka la eego sawirka iyo qaabka aniga ii jiro ma jiro qof garaaca, hal shay oo igu kacaya oo ku saabsan sabayoon waa amarrada, aniga waxay ii yihiin kuwo aad u dhib badan, tan iyo markii aan ku tijaabiyay laptopkeyga cusub, waan kari waayey rakibi wadayaasha sawiradayda muuqaal cusub iyo waqtigaas, laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay waqtigii la siin lahaa fursadan 'disro' oo aan aragno awoodeeda hadda, ……
Laga soo bilaabo nooca 5.5 waxaan u maleynayaa in sabayon uusan mar dambe loo baahnayn in lagu rakibo wadayaasha sawirada ama Wi-Fi sidoo kale waqtigaas ma aysan qalabaysnayn taasoo si weyn u fududeyneysa dhammaan howlaha la xiriira xirmooyinka, maadaama aysan muhiim ahayn in la isticmaalo sawirada: p, I Waxaan isku dayay qaybintaan qaybtii 4aad markii ay lagama maarmaan noqotay in la isticmaalo xirmooyinka xirmooyinka oo aanan awoodin inaan xasillo muddo dheer iyadoo loo siman yahay wax walba wax badan ayaa iska beddelay
Haa, markii aan isku dayay waxaan haystay waqti yar sidoo kale waxaan haystay Linux markaa bal qiyaas sida ay ku dhammaato, laakiin waxaan ka jeclaaday wax ka badan Ubuntu, oo ahayd tii ugu horreysay ee aan isku dayo
sawiradaasi waa wax la yaab leh laakiin garashada sida loo adeegsado waxay leedahay mudnaan, waa inaad ka taxaddartaa waxyaabo badan oo walxaha argagaxa leh waxay soo baxayaan 2 ilaa 3 kasta ka dib casriyeyn muhiim ah oo dhexdhexaad ah haddii aadan ogeyn waxaad sameyneyso, iyadoo loo siman yahay dhammaantood isku xirnaanshaha ayaa kali ahaa waana inaad kaliya cusbooneysiisaa adigoon walwal gelin, inyar oo kayarna runti waa xasiloon tahay isla markaana equo waxay noqoneysaa mid ka mid ah maareeyayaasha xirmooyinka ugu fiican ee aan abid arko, in kasta oo taasi ay tahay fikrad shaqsiyadeed, aragti ahaan waa tan ugu fudud si aad u isticmaasho sii deynta kde
hal shay, qofna ma garanayaa waxa loo yaqaan 'sabyon cabsi badan' iyo waxa ay ka yiraahdeen 'sabayon 8' oo ahayd qaybintii ugu horreysey ee sii deynta xad dhaafka ah Anigu maan fahmin waxyaabahaas markii la bilaabay sabayon 8: s
Waa kan shaashadda:
Of "Siidaynta Xad-dhaafka Ah", Waxaa loola jeedaa in maareynta otomaatiga ah ee xirmooyinka bakhaarada lagu fuliyo lasocodka ebuilds Entropy Matter, maareeyaha xirmada ee lala heli karo halyeeyga Portage.
Waxaan rajeynayaa inaan kaa saaray shakki 😀
Ugu dambayntiina casharro aan caan ahayn oo ay yihiin laakiin ay iyagu leeyihiin waa wax aad u fiican, waxaan u maleynayaa inay aad muhiim u tahay in bogagga Linux ay joojiyaan inay waqti badan siiyaan Ubuntu, Linuxmint, Fedora, OpenSuSe iwm, way fiicantahay in isticmaaleyaasha cusub ay hayaan dukumiinti oo ka mid ah distros-ka la maareyn karo, laakiin sidoo kale waa muhiim in kuwa hadda ku jira Linux ee doonaya inay ka boodaan ay heli karaan casharro sida Eebbe ugu talo galay, aniguna waxaan u leeyahay maxaa yeelay way adag tahay in laga helo barasho wanaagsan Sabayon iyo wixii ka sarreeya oo dhan.
Waad ku mahadsantahay saaxiibka faallooyinka, waa ku faraxsanahay inaan halkaan kugula kulanno 😉
Waad soo dhawaynaysaa, saaxiib, jawig noocee ah ayaad ku leedahay Sabayon? Haddii aysan ahayn wax dhib ama ku xadgudubka arimahaaga gaarka ah, ma waxaad na siin kartaa shaashadda miiskaaga Sabayon si aad u aragto sida ay wax u eg yihiin, sida nin jaal ah oo ka socda distoorku yidhi, sidoo kale waan ku faraxsanahay la Arch. Salaan ..
Sawirada boostadu waxay ka socdaan desktop-kayga, wixii aad ka arki karto waxaan ku hayaa KDE kombiyuutarkayga: D.
Aniguba waan jeclahay KDE, sida muuqata sidoo kale waxaad jeceshahay minimalism, waxaad kuheshaa sifiican wadankeyga, kiiskeyga waxaan jeclahay conky nasiib wanaag dhib ayaan kala kulmay daahfurnaanta, iyo desktop-ka waxaan uga tagayaa si bilaash ah astaamo, waxaan sifiican ugu dhajiyay golaha (Chromium, Konsole iyo dolphin), kaliya waxaan isticmaalaa saacadda analogga waana intaas.
Waxaan ahay Talyaani wayna igu adagtahay inaan dhaho, laakiin runtii kde waligeed sifiican ugama bilaaban laptop-kayga, dvd desktop-ka iyo qolofka gnome marwalba waa la raran jiray, qiyaasi sida ay ulasocdeen darawalada lahaanshaha, hada hada uma lihi inaan markale iskudayo, dhawaan waan sameyn doonaa intelkeyga oo leh nvidia waana taas XD.
Haa, waa sababta kaarkaaga ATI, haddii aan si sax ah u xasuusto. Dhibaatooyin badan ayaa leh isla dhibaatadaas.
Waxaan rakibay bishii Febraayo markay soo baxday, live-ka DVD-ga si fiican ayuu u shaqeeyaa laakiin markii aan rakibay weligay kama kicin jawiga garaafka sidaa darteed waxay ahayd niyad jab.
Waxaan sidoo kale rabaa inaad iibsato laptop yar oo ah acer aspire 4750-6625 oo keena daaqadaha 7 iyo qayb soo kabasho ah iyo fedora 16 ama alpha 17 midna, waxay kor u qaadeysaa jawiga garaafka aniga ahaan, sida ubuntu 11.10 iyo ubuntu 12.04 ma rakibayso kernel sidaa darteed waxaan luminayaa iimaanka. Nasiib wanaag Ubuntu 11.04 32 xoogaa haddii aan maareeyo si aan u rakibo dhibaato la'aan laakiin waxaan doonayay inaan haysto wax ka sii badan oo hadda jira iyo 64 wax yar maadaama laptop-kayga uu yahay mid muhiim ah 5 oo leh 6 wan waxaanan doonayay inaan ka faa'iideysto, runta waxaan dareemayaa inaan aad uga xumahay
Dhibaatada lafteedu kama timaaddo walxaha aad tijaabisay, badanaa waxay u sabab tahay nooca qalabkaaga. Akhri maqaalkan saaxiibkay MoscowWaxaa laga yaabaa inaan adiga ku anfaco
Perseus waan kaaga mahadcelinayaa rabitaankaaga inaad isku daydo inaad caawiso laakiin laptop-kaygu malaha kaar garaaf ah oo u gaar ah maxaa yeelay wuxuu leeyahay Intel 3000 graphic chip ama wax la mid ah, si fiican hadda hadduu ka qabow yahay sariirtaada
Waxaan la yaabanahay sida ay taageeradeeda u noqon doonto Xfce / LXDE… Sababtoo ah runtu waxay umuuqataa inay tahay distoor xiisa badan oo la isku dayo.
"Cusboonaysiinta waxay qaadan kartaa 3 ilaa 8 saacadood" Tani way ila yaabtay.
Eebbe samir haka siiyo distoorkan. 😀
Waxa aan ka helay DIIWAANKA QORAALKA BADAN.
Muxuu ku fiican yahay compro comprore 😀
Miyuu jiraa qof yaqaan jaaliyad fedora ah oo Isbaanish ah ??
Distro-kani waligiis wuu i jaleecaa, laakiin weligay kuma dhicin inaan isku dayo. Aad baan ugu raaxeysanahay Arch waqti aad u dheer hada, laga yaabee markaan waalanahay inaan isku dayi doono ugu dambeyn.
Waan jeclahay distoorkan, waxay ka mid tahay kuwa ugu cadcad, muuqaallada ayaa aad u guuleysta (Waan jeclahay animation-ka bilowga baarka, waa mid ka mid ah kuwa ugu fudud isla markaana isla markaa guuleysta ee aan arkay), waana jeclahay sida wanaagsan iyo dheecaanka ay u socoto wax walba.
Waa wax fiican inaad wax ka qorto waxyaabo kale oo diro ah, iyo inbadan oo ku saabsan Sabayon, waxaan u maleynayaa inay fiicantahay oo aysan laheyn mudnaan ay u qalanto, sida "hooyadeed" Gentoo oo kale.
Waan isku dayay laakiin ugu dambayntii maan jeclayn, waxaan ka soo booday Chakra illaa Sabayon 8 isla markaana equo la barbardhigi maayo pacman xD.
Hadda waxaan joogaa Pardus 2011.2 yaase dhihi lahaa in gabadha TÜBITAK ay noqon laheyd midda xada qalbigeyga, way i xanuunaysaa inaan la soo daahay iyada iminkana mustaqbalkeeda lama oga TT_TT
Waqti dheer ka hor ayaan sidoo kale rakibay Sabayon, ma xasuusto nooca ay tahay sidoo kale waxaan layaabay waxyaabo ka mid ah: Waxaan sidoo kale jeclaaday habka loo rakibo xarkaha waxayna leedahay falsafad ah in wax loo sameeyo qaab aad u fudud, kaas oo inta badan Distros, maahan in wax walba la xuso, waxbaa loo sameeyaa hal dariiq maxaa yeelay waa Sabayon, iyadoo la raacayo falsafadooda, waxaa loo sameeyaa qaab kale, tusaale ahaan, haddii aan si sax ah u xasuusto, waxaan u maleynayaa in lagu hagaajinayo bilowga codsi halkaas heerarka fulinta init3 ama init5 kama duwana halkaas waxaa loo qabtay si ka duwan. Waan yara yaabay faahfaahintaan maxaa yeelay weligey ma arkin, ma garanayo sida ay wax hadda u socdaan.
Waxa aanan jeclayn ayaa ah inay ku rakibto barnaamijyo aad u tiro badan markii hore isla markaana ay nidaamka ku shubto faylal fara badan, tusaale ahaan guriga isticmaalaha oo aan ka dhicin meelo kale oo kala duwan mana aanan arkin kde aad u dheecaan badan oo ka soo jeeda gentoo iyo a xusuusta isticmaalka sare iyo dhibaatada qaar ka mid ah cusbooneysiinta sababtoo ah nidaamkeeda wareejinta inkasta oo tan aan u maleynayo inay ku dhici doonto dhammaantood.
Waad salaaman tahay, faallooyinka xoogaa waa laga dhacay laakiin haye.
1aad Markii aan aqriyay waxaan rabay inaan tijaabiyo
Hadda oo aan ku rakibayo OS-ga kumbuyuutarkeyga waa la i dhiirrigeliyey aadna waan u jeclahay, waxaan ahay caajis inaan u cusbooneysiiyo maadaama ay tahay waqtigii la seexan lahaa mana jecli "buuqa" pc-ga, waxaan haystaa rakibay xfce waxaanan jecelahay aragtida koowaad ee aan daawanayo, waxaan isku dayay Xubuntu mana jeclayn
PS: boostada wanaagsan waxayna ka caawisaa wax badan waxa la sameeyo ka dib rakibidda
Waa salaaman tahay, waa la akhriyay qoraalkan oo rakib. Waa inaan sheegaa in markii hore aan dhibaato ku qabay kaarka nacaladda ah ee ATI Radeon, laakiin waxaan ku xaliyay caawinta bulshada.
Gunaanad: aniga ahaan distoorkani waa kacaan, dhowr sano oo la furay, 1 sano oo Ubuntu ah waana kan sii joogi doona! Waan ku faraxsanahay! oo waliba waa sii deyn release
Kaliya waxaan ugu mahadcelin karaa boggan "iibin" yaabkan.
Taa bedelkeeda, waad ku mahadsan tahay aqrinta aad na siisay :-D.
lorenzo .. sidee mushkiladda ugu xallisay kaarka ATI RADEON? .. Waxaan hayaa ati radeon HD 4670. Waxaan rakibey sabayoonka 9, waxaan sameeyey wax walba oo kor ku xusan, laakiin rakibidda iyo rakibidda kadib .. markii dib loo bilaabayo Mashiinka kor uma qaadayo X-ga, qunsuliyada markaan qorayo aticonfig –initial waxaan helayaa aaladaha halyeeyga oo aan la ogaan, iyo /var/log/Xorg.0.log waxaan helayaa waxyaabaha soo socda
[77.730] (WW) Ku noqoshada qaabkii hore ee baaritaanka ee fglrx
[77.746] (II) Raritaanka keydka macluumaadka PCS ee laga helo / iwm / ati / amdpcsdb
[77.746] (EE) Lama helin qaboojiyeyaasha muujinta AMD ee taageera
[77.746] (EE) Qalab lama helin.
Ma jiraa qof i siin kara xiriiriyeyaasha si aan u soo dejisto Chakra 2012 KDE iyo / ama Sabayon 8 KDE labadaba 32-bit ISO ah? Fadlan waxaan rabaa inaan isku dayo labadaas disros
Ku jawaab juanmett20
Ma waxaa jira beel weyn oo Isbaanish ah? Kaliya waxaan ku arkay kan rasmiga ah oo Ingiriis ah, laakiin ma aanan arkin dad badan oo isticmaala Isbaanishka oo isticmaala
xayoo 1994 dijo
Horey ayaan u rakibay laakiin waxaan ka baqayaa inaanan rakibi karin kaarkayga isku dhafka ah maadaama Ubuntu waan ogaa laakiin halkan fikrad kama haysto waxaan rajeynayaa inaan nasiib yeesho, waad soo rogi kartaa cashar su'aashaas ah
PDF kasta oo la adeegsado Entropy ama Portage?
Waan aqriyay Sabayon wiki laakiin waxbadan ma fahmin!
Cajiib !! Waad ku mahadsantahay soo galinta. Wuxuu had iyo jeer "iigu yeeraa" Sabayon. Hadda waxaan tijaabinayaa. Mahadsanid saaxiib
Ku jawaab kerigan
Salaan sxb. Waxaan kaliya rakibay sabayoon. Saacad gudaheeda waan cusbooneysiiyey. Dhibaatadu waxay tahay Entropy aniga ima furi doono. Waxaan ku kiciyey oo waxba. Waxaad i weydiisay lambar sir ah. Marka hore waxaan dhigay 'uzuario', iyo waxba. Markaas ayaan dhigay erayga sirta ah. Daaqadda i weydiisa erayga sirta ah ayaa baaba'aysa oo wax kale oo dhaca ma jiraan. Wax ma ii sheegi kartaa? Waad ku mahadsan tahay kana xumahay dhibaatada
Iyada oo leh MATE waxay umuuqataa mid qumman! Waan ku jeclahay VBox, waan arki doonaa waxa aan sameeyo… 😛
hello, waxaan dhibaato ku qabay kadib markii aan cusbooneysiiyo nidaamka ay si fudud waxyeello soo gaarto, kuwa soo socdaa waxay u muuqdaan: ooy waxbaa khaldamay oo nidaamku ma soo kaban karo. Qof ma ii sheegi karaa sababta ??? ka dib markii aan awoodi kari waayey inaan ka soo kabto nidaamkayga iyo ka dib markii aan rakibay dhowr jeer waxaan rakibay qaanso. Laakiin waxaan qabaa dareen xun oo ah ogaanshaha waxa dhacay, maxaa yeelay waxaan isticmaalayay sabayo muddo dheer.
Ku jawaab cesartru
Waxaan hayaa su'aal, waa inaan qaabeeyaa wadayaasha fiidiyowga (waxaan haystaa kaarka SIS) Ma heli karo waddo aan ku rakibo baakadaha aan u baahanahay inaan ururiyo maaddaama lagu sameeyo sabayoon lagu rakibo? = S
Qaadashada XFCE, midkoodna kombuyuutarrada kale ee aan jeclahay. Ma haysaa wax codsi ah oo aad dib ugu cusbooneysiin karto iso ??? Waxaan sifiican ugu sii wadi lahaa Linux key-kayga meesha aan ku haysto wax kasta oo aan u baahdo.